नेपालीको सान , मान र पहिचारलाई उजागर गर्नका लागि अंग्रेजी नयाँ बर्ष भन्दा सबैले नेपाली टोपी लगाई टोपी दिवस मनाऔं !!! – सुदूरखबर डटकम
नेपालीको सान , मान र पहिचारलाई उजागर गर्नका लागि अंग्रेजी नयाँ बर्ष भन्दा सबैले नेपाली टोपी लगाई टोपी दिवस मनाऔं !!!
label समाचार प्रकाशक query_builder December, 31 2018
टोपी टाउको ढाक्नेगरी लगाउने कपडा वा टाउको पहिरन हो । यो शिर छोप्न, त्यसको शोभा बढाउन वा रक्षा गर्नाका निम्ति चाउलो टोपीको घेरामाथिको भाग वा चक्का र घेरा हाली सिइएको बस्त्र हो । टोपी पुरुषहरूले लगाउँछन् । नेपालीले प्राचिनकालदेखि टोपी लगाउने गरेको पाइन्छ ।
नेपाली टोपी नेपालीहरूको राष्ट्रिय पोशाक हो । टोपी मुख्य रुपले नेपालको पहाडी भू–भागमा बसोबास गर्ने प्रायः सबै थरिका मानिसहरूले परम्परागत रुपमा लगाउने गर्छन् ।
टोपीका कपडा घरेलु तानबाट बुनिन्छ । भक्तपुरमा कालो टोपी बनाइन्छ, जसलाई भादगाउँले टोपी भनिन्छ । पाल्पा, पोखरा र तेह्रथुममा ढाका टोपी बुनिन्छ । साधारण कपडाबाट पनि टोपी सिउने गरिन्छ ।
टोपीलाई शिरपोस पनि भनिन्छ । यस्तै ढाका टोपी ढाकाको कपडाबाट बनेको पुरूषहरूले लगाउने पहिरन टोपी हो। प्राय दौरा सुरूवालको साथमा ढाका टोपी लगाउने गरिन्छ । ढाका टोपीले नेपाली जातिको पहिचान झल्काउछ । पाल्पाली ढाका टोपीलाई देशकै उत्कृष्ट ढाका टोपी मानिन्छ ।
मेरो टोपी कैलासको शिर जस्तो, हिमाली भीर जस्तो
कहिले पनि झुक्न नजान्ने, कहिले पनि लुक्न नमान्ने
नेपाली वीर जस्तो नेपाली धीर जस्तो
मेरो टोपीभित्र मेरो बहिनीको मायाको बास छ
अहिलेसम्म भोगेको मैले मेरै घाम छाँयाको बास छ
मेरो टोपी मैला होइन यही माटोको टीका लागेको
मेरो टोपी गाउँलेको शिरमाथि मेरो टोपी लाहुरेको शिरमाथि
ठूलो सानो जान्दैन यो भेदभाव मान्दैन यो मेरो टोपी
सुहाइदिन्छ सबै सबै नेपाली शिरमाथि
धावा धावा अखडाभित्र मेरो टोपी लड्दै थियो
सगरमाथा उँभो पनि मेरो टोपी चड्दै थियो
मेरो टोपी खाज्दै गएँ सागरदेखि सगरसम्म
जहाँ पनि जहिले पनि यो त अधि बड्दै थियो
मेरो टोपी हितैको साथी जस्तो, आमाको छाति जस्तो
दुःख सुखमा काम लाग्ने, नेपालीको नाम राख्ने
माथिका यी गीतका हरफहरु चर्चित गायक गोपाल योन्जनले गाउँनु भएको हो । म नेपाली, तपाई नेपाली, उ नेपाली र हामी सबै नेपाली नेपालीको पहिचान नेपालीको गौरव अनि हामी सबैको शीरमा लगाउने टोपी नेपाली टोपी ।
जब जब टोपीको कुरा उठ्दछ सम्झन्छु इतिहासलाई अनि वीर नेपालीलाई । वास्तममा राष्ट्रियता झल्काउने नेपाली ढाका टोपीको महत्व देश तथा विदेशमा धेरै छ ।
नेपाली र नेपालीमूलका नागरिक भएका सबै देश र स्थानहरुमा नेपालीपनको निरन्तर खोजी तथा त्यसको संरक्षण र प्रबर्द्धन भैरहेको अहिलेको अबस्थामा समग्र नेपालीहरुको साझा र मौलिक पहिचानको चिन्ह नेपाली टोपी रहेको छ ।
हाम्रो मान, शान र पहिचान नेपाली टोपी हो । यसको सम्मान अब हामी सबैले गर्न जरुरी छ । विदेशमा गएर टाइसुटमा सजिएका युवाहरु र स्वदेशमा रहेर पश्चिमा संस्कृतिमा रमाउँदै तिरमिरे टोपीमा रमाउनेहरुले अब नेपालीको पहिचानलाई जोगाउनु पर्ने बेला आएको छ ।
दिनमा नेपाली टोपी दिवस मनाइने भएको छ । सदा झै यो वर्ष पनि जनवरी १ लाई नेपाली पोशाक लगाउने दिनका रुपमा मनाइने कुरालाई आजभोलि समाजिक सञ्जालहरुमा निकै महत्वको साथमा हेरिएको छ ।
राष्ट्रिय पोशाकको प्रयोग गरी राष्ट्रियपन झल्काउन र यसको जगेर्ना गर्नका लागि भन्दै १ जनवरीलाई नेपाली पोशाक लगाउने दिनका रुपमा मनाउन थालिएको अभियान कर्ताहरुले बताएका छन् । सो दिन नेपाली राष्ट्रियता झल्काउने पोशाक लगाएर अभियानमा समर्थन जनाउन र राष्ट्रियताका लागि केही ऊर्जा प्रदान गर्न सबैमा अभियानकर्ताहरुले आग्रह पनि गरेका छन् ।
वर्षको एकदिन राष्ट्रिय पोशाक लगाएर सामाजिक संजालमा फोटो अपलोड गर्दैमा राष्ट्रियता नजोगिएपनि राष्ट्रियता संकटमा पर्न थालेको वर्तमान अवस्थामा यसले केही मात्रामा भए पनि टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो अभियानमा देश–विदेश र गाउँ सहर जो-जहाँ भएपनि सक्दो सहयोग गर्दै अभियान चलाउन आग्रह समेत गरिएको छ । सम्भव भएसम्म सधै नेपाली पोशाकमा सजिऔ, सम्भव नभए हरेक वर्ष जनवरी १ का दिन नेपाली पोशाक लगाऔ र सोसियल मिडियामार्फत नेपाली पोशाकको प्रचार–प्रसार गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।
नयाँ बर्षको उत्सव हुने र त्यस अवसरमा नेपालीपनको प्रयोग गर्न र नेपालीहरुमा समेत उक्त दिनमा पर्वजस्तो उल्लासमय बाताबरण हुने हुनाले उक्त दिनमा नेपाली टोपी लगाएर नेपाली टोपी दिवस २०१४ जनवरी १ बाट संसारभर मनाउन शुरु गरिएको हो । यसले अन्तराष्ट्रिय रुपमा नेपालीपनको प्रबर्द्धन हुने र देशभित्र पनि टोपी संस्कारलाई थप प्रबर्द्धन र प्रचारप्रसारमा मद्दत गर्दछ ।
बिगतका बर्षहरुमा पनि संसारभरबाट भएको सहभागिता र संचार माध्यमहरुबाट पाएको सद्भभावना यसपटक पनि प्राप्त हुने हुने कुरामा कुनै दुइमत छैन ।
गत बर्ष जस्तै यसपाली पनि १ जनवरी २०१९ का दिन अन्तर्रा्ष्ट्रिय नेपाली टोपी दिवस भव्यताका साथ मनाउन आ-आफ्नो स्थान र अवस्था अनुसार नेपाली टोपी लगाऔं, फोटो खिचौं अनि नेपाली टोपी दिवसको फेसबुकमा अपलोड गरौँ भन्ने नारा अभियानकर्ताहरुले बोकेका छन् ।
हाम्रो मान, शान र पहिचान नेपाली टोपिलाइ सम्मान गर्ने अभिप्रायले जनवरीको पहिलो दिनलाई टोपी दिवसको रुपमा मनाउ भन्नेजस्ता नाराहरुले निकै चर्चा कमाएका थिए। जनवरी १ मा अंग्रेजी पात्रोको चलन भएका देश र स्थानहरुमा नयाँ बर्षको उत्सव हुने र त्यस अवसरमा नेपालीपनको प्रयोग गर्न र नेपालका नेपालीहरुमा समेत उक्त दिनमा पर्वजस्तो उल्लासमय बाताबरण हुने हुनाले उक्त दिनमा नेपाली टोपी लगाएर जनवरी १ लाई अझै बिशेष बनाउन सकिन्छ भन्ने अवधारणा रहेको पाइन्छ।
अंग्रेजी नयाँ बर्षको पहिले मिति लाई साभार गरेर नेपाली टोपी दिवसको सुरुवात गरिएको थियो जुन अत्यन्त सफल पनि भएको छ । यसरि नै गत बर्ष पनि ‘हाम्रो टोपी हाम्रो सान, नेपालीको पहिचान’ भन्ने मुल नाराका साथ यो दिवस मनाईएको थियो ।
दिवसको अवसर पारेर सयौं पुरुषले शिरमा नेपाली ढाका टोपी पहिरिएका थिए । यस्तै उनिहरुले बिभिन्न ठाँउठाउँमा र्याली निकालेका थिए । प्रत्यक्षदर्शिले कुनै आन्दोलनको नारावाजी भएको महसुस गरेका थिए । तर, लाईनमा सबैका शिरमा नेपाली टोपी देख्दा कुनै चेतनामुलक र्याली भएको अड्कल काटेर र्यालीमा सहभागी भए।
जानकारका अनुसार यो दिवस मुलुककै पहिलो दिवसका रुपमा मनाईएको छ । र्यालीमा सबै उमेरका पुरुषको सहभागीता रहेको थियो । अन्तर्रा्ष्ट्रिय रूपमा नेपालीपन प्रवर्द्धन गर्न र देशभित्र पनि टोपी संस्कार विकास गर्न अन्तर्रा्ष्ट्रिय नेपाली टोपी दिवस मनाउन लागिएको हो।
शताब्दीऔंदेखि प्रयोग भइरहेको नेपाली टोपी प्रयोगलाई अझै व्यापक र विश्वमय बनाउने उद्देश्यले अभियान थालनी गरिएको हो । विश्वमा नेपालीहरुको पहिचान झल्काउने नेपाली ‘ढाका’ टोपीको महत्व धेरै छ ।
पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै नेपाली टोपीको पहिचान झल्कदै आएको र व्रिटिस साम्राज्यवादहरुले समेत नेपाली टोपीको गाथालाइ ईतिहाँसमा उल्लेख गरेको घटनाले समेत यो टोपीको आफनौ मौलिक महत्व रहेको छ ।
पछिल्लो समय राजधानी लगायत देशैभरी नेपाली टोपीको प्रदर्शन गरी ‘टोपी दिवस’ मनाउने परम्परा नै बसेको छ । विगतका बर्षहरुमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको शालिकमा नेपाली भादगाँउले टोपी पहिराउदै नेपाली टोपी दिवस विभिन्न ठाँउमा समेत मनाइएको थियो ।
नेपाली टोपी हाम्रो शिरमा रहँदामात्र हामी नेपाली भएको पहिचान हुने धेरैको भनाई छ । सबै नेपालीहरुले नेपाली टोपीको महत्व बुझ्न जरुरी छ । टोपी लगाएर पहिचान जोगाई राख्नुपर्ने धेरैको धारणा रहेको छ । यो आफैमा अत्यन्त सकारात्मक रहेको छ ।
(पौडेल प्रेस काउन्सिल नेपालमा सम्वद्ध छन्)
देशभर आज साउने संक्रान्ति पर्व मनाइँदै
मंगलबारको दिनमा यस्ता क्रियाकलाप गर्नाले मनोकामना पुरा हुनुको साथै सुख,शान्ति संबृद्धी प्राप्त हुने
आज शनिवार, शनिवारको दिनमा यस्ता क्रियाकलाप गर्नाले मनोकामना पुरा हुनुको साथै धन,धर्म र भाग्यको उदय हुने
कतै तपाईसँग पनि यस्ता खाले गुण छन ! भाग्यमानीमा यस्ता गुण अनि चरित्र देखा पर्ने छन
सनातन धर्मावलम्बी किन गर्छन् तुलसीको पूजा ?
यी हुन् तुलसीका १० नाम
आज हरिशयनी एकादशी, घरघरमा तुलसीको बिरुवा रोपिँदै
नेपालकै बज्रबाराहीमा गजुर किन नराखिइको होला ? मान्दिरमा किन घण्टी राखेका हुन्छन ?